Shiinaha qurxinta bannaanka naxaasta meerta biyaha farshaxanka ee warshadda iibka iyo soo saarayaasha | Shaqooyinka Atisan
Iibinta kulul jardiinada caanka nolosha weyn oo taagan naxaas ...
Qurxinta bannaanka naxaasta mermaid farshaxanka isha biyaha
Keyword: Sawir gacmeed Mermaid
TAG: Waxyaabaha Tilmaaman ee loo yaqaan 'Mermaid Statues' iyo Dolphin ee loogu talagalay iibinta Maarta Naxaaska ah iyo Dolphin Sculpture Life Size Bronze Mermaid Statue Dibadda Bronze Mermaid Statue
farshaxan naxaas ah mermaid farshaxanka isha biyaha
naxaas, naxaas, marmar, Bir
Qurxinta Bannaanka / Beerta
Dahab, naxaas iyo naxaas
H: 100-200cm ama la qaabeeyey
Xumbo gudaha iyo sanaadiiq alwaax ah
100% Gacan lagu xardhay
Taallada isha biyaha
Ku dayasho qaraami
Qurxinta Gudaha iyo Dibadda
Cusbi / Naxaas / Naxaas / Naxaas
Dhererka Caadiga ah ee 1.3M illaa 1.8M ama La qaabeeyey
Midabka Dusha sare:
Midabka asalka ah / dhalaalaya dahabka / jilitaanka hore / cagaarka / madow
qurxin ama hadiyad
Gacan-ku-sameynta Sifeynta Dusha sare
ansax ah heerkulka laga bilaabo -20℃ ilaa 40℃. Ka durugsanaanta dhagaxa dhagax, badanaa roob da'aa, meel baraf badan.
Hoolka qoyska / gudaha / macbadka / keniisad / fane / dhul baaxad / mawduuc iwm
Isticmaal Hubinta Ganacsiga si aad uhesho Fadlan Dheeraad ah! Ama by L / C, T / T
kala duwanaanta alaabta
Waxaan bixin karnaa taallo basas naxaas ah, taallo xajmi nololeed, farshaxan diimeed, taallo mary ah, taallo ciise ah, taallo malaa'ig ah, taallo david, taalada buddha, taallo guanyin, taallo xayawaan, taallo naxaas libaax ah, taallo madax libaax ah, taallo faras, taallo libaax, maroodi taallo, taallo gorgor, taallo naag qaawan, taallo nin qaawan, taallo jinsiyeed, taallo beerta ah, taallo ilmo yar, weel naxaas ah, tiir naxaas ah & tiir, taallo bannaanka ah, taallada guriga gudihiisa, wiil leh taallo eyda, taallo meeris, naxaas ama isha naxaas, laambad taallo, taallo aan la taaban karin, taallo miis bun ah, farshaxan bir bir ah iyo wixii la mid ah
Halyeeyga ku saabsan Mermaid
Sida ku xusan halyeeyga, meerisyadu waxay ku saleysan tahay dhexda, badankood waa haween qurux badan oo ku jira jirka sare, iyo kalluun qurux badan oo miisaan leh oo ku yaal jirka hoose. Jidhka oo dhami waa duufaan iyo fudeyd si dhakhso ah looga baxsado. Macaamiil badan ayaa jecel meerisyadan halyeeyga ah, sidaa darteed waxaan kuu soo saarnay farshaxanno naxaas ah oo noocyo kala duwan leh oo aad ku xulan karto.
Naqshad Naxaasta Maarta Maarta ah
Waxaan aqbalnaa farshaxanno naxaas ah oo maareys ah oo loo habeeyay, iyadoon loo eegin cabirka, maaddada ama qaabka, waxaad ka iibsan kartaa farshaxannada meeriska ah ee aad ugu jeceshahay halkan. Haddii aad jeceshahay inaad yeelato sawir gacmeed gaar ah, waxaan sugeynaa talo soo jeedintaada.
Warshad Wax Soosaar Xirfad Leh
Waxaan leenahay warshad wax soosaarka naxaasta ah iyo saynisyahanno farshaxanno badan oo xirfad leh. Waxaan kuusoo gudbin doonaa sawiro inta lagu gudajiro howsha waxsoosaarka waxaana sii wadaynaa soosaarka adiga oo raalli ka ah. Waxaan u dhoofinaynaa dunida farshaxanno naxaas ah, meel kasta oo aad joogto, adiga ayaan kuu soo gaarsiin doonnaa waqtiga loogu talagalay
Alaab la mid ah
S: Wkoofiyaddu waa lagu qiyaasay Waqtiga dirida?
J: Gudaha 30 maalmo kadib helgalaya hoos-lacag bixinta.
S: Which muddada bixintas waa la aqbali karaa?
J:1.Waxaa qoray T / T. 30% yahay dhigid iyo 70% yahay la bixiyay marka la ansixiyo wax soo saarka.
2.Waxaa qoray L / C. Waa in arag leh bangi la aqoonsan yahay.
3.Western Union ama Paypal qiimaha muunada.
S: Waa maxay twuu tayo leeyahay dammaanad qaad?
J: 1.Farshaxanka Marble wuxuu u hoggaansamaa laba heer.
a) ASTM C503-05 iyo ASTM C1526-03 loo adeegsaday marmar dabiici ah ee Quarry.
b) Sfarsamo yaqaan enior tayada heerka ama macaamiisha ' codsi
2.Naxaasta ama farshaxanka birta ah ee aan lahayn ayaa u hoggaansamaya laba heer.
a) Sida ku xusan warbixinta falanqaynta maaddada ee soo saaraha.
b)Sfarsamo yaqaan enior tayada heerka ama macaamiisha ' codsi
3.Nidaam maarayn tayo leh oo hufan awoodo aqbal qeybta saddexaad''s kormeerka, sida SGS ama iwm.
S: Wkoofiyaddu waa kharashka gaadiidka?
J: 1.Qiimaha lagu rakibo ee gaadiidka badda ama duulimaadka hawada laga soo gudbiyo.
2. Ku aqbal adeega DDU qiime macquul ah.
Hore: Hot iibinta qurxinta qurxinta alaabada beerta dhagax il biyo ah oo keruub ah
Xiga: Beerta casriga ah ee dhagaxa dabiiciga ah ayaa loo isticmaalay ilo biyo dibadeed ah oo marmar ah iib ahaan
Alaab cusub oo lagu qurxiyo biyo-dhaca ...
Gacan ku xardhan dibedda marble dhagax il biyood ...
Hot taallo marmar ah oo iib ah kulul oo ka baxsan biyaha fou ...
Beerta Beerta Marmarinta Cad iyo Marmar
Taallo bir ah oo naxaasta qurxinta gudaha lagu qurxiyo ...
Tayada wanaagsan ee biyaha fountai banaanka ...